Mid ka mid ah isbarbardhiga aan inta badan dadka uga sheego hay'addeena waa inaynaan ahayn Suuqgeyn Jiffy Lube. Shaqadeenu ma ahan inaan si deg deg ah kuu galino oo aan kaa soo baxno, warqad yar oo warqad ah ku dhajino muraayaddaada oo aan ku arko bisha dambe. Waxaan nahay in badan oo ka mid ah shaqaalihii ceelka oo si waalli ah u diyaarinaya gaariga tartanka. Waxaa jira waxyaabo badan oo ah Jiffy Lubes halkaas - ma dooneyno inaan ka mid noqonno.
Maaddaama ay tixraaceyso waxyaabaha ku jira, wakaaladuhu waxay kuu hayaan khadka wax soo saarka. X tirada tirooyinka bil kasta, X tirada cadceedda, X tirada faafaahinta oo ay ku kacayso qiimo dhan X dollars. Qandaraasku wuu bilaabmaa iyaguna way soo saaraan. Waxaa lagu siiyaa wax soo saarka iyo waqtigiisa mashruuca iyada oo aan fiiro gaar ah la siin in aad ku guuleysato tartanka iyo in kale.
Waxaan aragnaa shirkado badan oo iska diiwaangaliyay istiraatiijiyaddan maxaa yeelay - marka hore - waxaa jira tiro badan oo nuqullo-qoraalo ah oo halkaas jooga oo doonaya shaqo joogto ah iyo - tan labaad - ma aysan awoodin inay soo saaraan waxyaabaha ku jira gudaha waxayna ogaanayaan inay luminayaan tartamayaashooda. Nasiib darrose, maadaama aysan dhag jalaq u siinaynin waxqabadka mawduuca, waxay sii wadaan inay lumiyaan.
Waa qaab fidsan oo aan dib ugu laabanayn maalgashiga. Waa xariiq isku imaatin oo leh celcelis shey
Istaraatiijiyadda labaad ee aan daawano hay’ado badan oo ay geynayaan ayaa ah saami qaybsiga or joogitaanka webka istaraatijiyad. Kani waxaa ka mid ah nuxur iyo dhiirrigelin, iyadoo sharciyadu yihiin inaad lahaan kartid wax badan oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha soo-galaya haddii aad wax badan qorto oo aad inbadan sii dhiirrigeliso. Ack… maxaa waqti lumis ah. Hubaal, kordhinta saamigaaga codka ayaa kuu horseedi doonta hogaamin badan. Ma ihi haba yaraatee poo-pooing istaraatiijiyad wax soo saar ballaaran iyo dhiirrigelin, laakiin waxaa lumaya fursad aad u ballaaran.
Waa dariiq toosan oo leh soo laabasho toosan oo maalgashi ah. Waa xariijin dhakhso leh isku celcelis shey.
Kawaran haddii aad qori lahayd waxyaabo kayar oo macno badan lahaa, kor uqaadi lahaa, oo aad u kordhin lahayd baahida si aad ah? Taasi waa sababta aan u horumarinay habka maamulka nuxurka macaamiisha. Maaha xawaareynta qadka isku imaatinka iyo soo saarista isbeddelka saliidda. Waxay dhiseysaa gaariga tartanka ka dibna ku jiidaya godadka mar kasta oo aad lumiso hogaanka.
Waa hab iska caabin ah oo leh soo laabasho sii kordheysa ee maalgashiga. Waa qadka tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah loo iibin karo.